China Isikhwama Esiphefumulayo Sesikhwama Sokwakha Nokwakha | UKinghow
Isithwali sethu senja sivunyelwe yinkampani yezindiza futhi sinamacwecwe angaphakathi anezinhlaka futhi sithambile, senza izilwane ezifuywayo zizizwe zikhululekile futhi ziphephile ngaphakathi futhi zingathanda ukuhlala phansi zilale kancane.
Izici Zenkampani Yezilwane
Thatha isilwane sakho ngokuphepha ngomthuthi othambile. Yakhelwe ukugcina isilwane sivikelekile, siphephile futhi sinethezekile. Lesi sithwali sesilwane sikulungele ukuhamba ngendiza noma imoto noma ukumane uvakashele udokotela wezilwane futhi kufanele izinja namakati anesisindo esifinyelela ku-15lbs.
Idizayini eqinile nethembekile:
Ukuthuthwa okuphephile, umthuthi ufakwe izibambo ezi-2 ezixhumekayo ukuhambisa isilwane nokugcina ibhalansi.
Kufaka phakathi ne-strap ehlombe eguquguqukayo ukuyiphatha ngaphandle kokusebenzisa izandla zakho. Ingasongwa ibekwe ngaphansi kwezihlalo zendiza; Ngale ndlela, ungahlala uhamba nesilwane sakho ngaphandle kokuhamba ngokwehlukana.
Ukwesekwa kwesilwane kunokuvula uhlangothi ukuvumela isilwane ukuthi singene ngaphandle kwezinkinga. Uziphu ohlala isikhathi eside ugcina ukuvuleka kuvalwe ngokuqinile lapho kuthuthwa.
Amapaneli wokungenisa umoya anezikhala eziphefumula ezinhlangothini ezintathu awaqinisekisi kuphela ukuhamba komoya okwanele, kepha futhi avumela isilwane ukuthi sibheke.
Ukuma kwesilwane kunesisekelo esikhiphekayo esakha indawo eqinile futhi ezinzile yesilwane sakho, kanye nombhojana woboya osusekayo.
Inikezela ngombhede onethezekile lapho isilwane sakho singalala khona phakathi nohambo. Kuyindlela ekahle yokuhamba nezilwane ezifuyiwe.
Imininingwane yezokuphepha: Ungashiyi isilwane singanakiwe ngenkathi sikuthwali. Lapho uhamba ngemoto, beka umthuthi esihlalweni esingemuva.
Ukuhlanza: Umbhojana othambile woboya ungasuswa futhi ugezwe ngesandla, ngenkathi ungakwazi ukuhlanza ubakaki lapho ungcoliswe khona.
Ubukhulu: 41.1 * 24 * 30.7cm /16.2 * 9.45 * 12.1 amayintshi (Sicela ulinganise ubukhulu nesisindo sesilwane sakho ngaphambi kokuthenga)
Langaphambilini Ubhaka wesikhwama esikhwameni esidayisa kabusha - Ubhaka wesikhwama esincane Isikhwama Somyalezo - iKinghow
Olandelayo: Abahleli Bokupakisha Ama-Cubes Wempahla
inja ithwala isikhwama
I-Leakproof Soft Cooler Backpack Beach Camping
Itende Elixokayo Lomuntu ongu-1-2
Mens Nylon Belt 51 intshi Elastic Stretch
Isikhwama Esipholile Sivikelwe Amatende
Isiphathi Sezinja Esinwebekayo Esinwebekayo
Izindlela ze-6ways Hands Free Dog Leash